> Resource > macruufka > 5 Music Apps ee macruufka 7 aadan u ogaadaan
Waxaad tahay halkan, maxaa yeelay, aad cajiib ah oo ku saabsan barnaamijyadooda 5 music ee macruufka 7 aan aad ugu garataan, sax? OK, haatan waa wakhti ah in aan ku bilaabaan inay baadhaan yar oo caan ah, laakiin barnaamijyadooda music wanaagsan macruufka 7. Ma aha barnaamijyadooda music in caanka ah, sida Pandora, Spotify, last.fm, ama xitaa Youtube, ma fiicna. Laakiin waxaan u baahanahay si ay u sahamiyaan barnaamijyadooda music kale oo muhiim ah in si wanaagsan noo nolosha. Bal aynu eegno ah ee Chine 10 music ee macruufka 7.
In kastoo bilaabay sanadkii 2008, laakiin ma lahayn ee horumarinta, 8tracks ma aha sida caanka ah sida kuwa kor ku xusan waxaan ka. Si kastaba ha ahaatee, dad badan waxay jecel yihiin. Waa xarun raadiye oo Internet ah. Hadda waxa soo kala soocay qoraalkii for iPhone iyo iPad. Waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi app music ku saabsan arrimo 7 iPhone ku salaysan ama iPads si ay u sahamiyaan ka badan in ka badan 650,000+ keegag kuwaas oo abuuray dadka. Oo waxaad la wadaagi kartaa keegag aad abuuray dadka kale. Waxaad awoodaa inaad hesho music by galaya hab kasta, sifayn, dhaqdhaqaaqa ama xulashada mid ka mid ah qaybaha 8tracks ayaa la siiyaa.
Panamp waa ciyaaryahan music qalabka macruufka, oo ay ku jiraan iPhone iyo iPod taabashada ah. Waxa kale oo ay taageertaa macruufka 7. Waxaa loo yaqaan for the 'safafka' firfircoon oo dadka isticmaala abuuri karaan ka jecel kuwan raadkaygay ku saabsan go ka. Its gacanta ku loo maqli karo caqli sii shaashadda, kaas oo la heli karo waqti walba, oo bixiya users gacanta ku tilmaam adag.
Exfm saamaxaya kuwa isticmaala inay isu soo ururin gabay jecel yahay gaar ah ee profile iyo aad ula wadaagto dadka oo ay raacdaysteen. Waxaa ka shaqeeya mabda'a this: aad la abuuro profile ah oo guji icon wadnaha haddii aad jeclaan song aad maqalka. Si aad u ogaado kuwan raadkaygay cusub, waxaad raaci karaan dadka inay maqlaan waxa ay jecel yahay. Waxa uu kala soocay qoraalkii ay Gordhaw Kadhoofaan 7 qalabka, iPhone, iPod taabto, iyo iPad.
Lisnr waa app music ee macruufka 7 qalabka koobaya masaafada u dhaxaysa fanaaniinta iyo taageerayaasha ah. By isticmaalkiisa, fanaaniinta taageerayaasha samatabbixin karaan heeso cusub si ay u dhagaystaan ​​ka hor inta aadan daabacin, ama u yeedho, inay ka qayb galaan xaflado ah. Oo kanu waa ku dhaaf iyo lacagihii fanaaniinta ku faraxsan yihiin in ay samatabbixin. Oo kanu waa content gaar deg deg ah iyo waqtigii loo dhiibi doonaa dadka isticmaala telefoonka.
TunesIn Radio noqdo iyo aad u badan oo loo yaqaan dadka, inta badan, sababtoo ah waxaa ka mid ah 100000 + saldhigyada live radio, oo daboolaya music, news, isboortiga, hadal, iyo kuwo liita comedy, 2 million podcasts, xaflado iyo muujinaysaa on macruufka aad 7 qalabka, oo ay ku jiraan iPhone, iPad iyo iPod taabto. By isticmaalkiisa, waxaad ku xasil karo iyo dib u socon idaacadaha nool.
PS: Haddii aad heeso qaar ka mid ah lagala soo bixi meel si toos ah aad iPhone, waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) si ay u helaan, kuwaas oo heeso guuriyeen in aad Lugood Library kombiyuuterada aad.
2 Siyaabo Sahlan ee Delete macruufka 7 labalaabka Photos